Otu esi eme ka ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ala gị na saịtị WordPress - ITS Techschool
Na ohere na anyị nwetara dollar mgbe ọ bụla mmadụ kwuru maọbụ jụọ ajụjụ banyere ụba ego, anyị ga-abụ tycoons. Nke ahụ bụ ikwu, ọtụtụ ihe ekwuola, dere ma nweta ụfọdụ ozi banyere "anụ ọhịa" a na-arụ ọrụ na-egosi na ụjọ na-atụ otu.
Na mgbe mgbe Ụgha Bounce Kwesịrị Ịkpa Gị Ahụ
Ihe mere ị ga-eji belata ọnụahịa na saịtị WordPress gị
Mbelata ọnụahịa ọnụahịa na WordPress Site
Ọnụ Ụgwọ Ọnụahịa bụ Metric Satisfaction User
Nchighari nke ka mma
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọnụahịa dị njọ maka WordPress SEO
Ịkwụsịlata Ụgha ọnụahịa na saịtị WordPress gị
Na-echebara okporo ụzọ gị anya
Mee ka ngwa ngwa nke saịtị gị
Mee WordPress Site Nsorouzọ
Mee ka Ojuju gi diwanye ka iwelata onu ogugu
Mee kawanye SEO na PPC Advertising
Ọnụ Ụgwọ Bịa na Njikọ
Zụlite Njikọ Broken Links
Gụnye ndị metụtara ya
Blog Na-ekwu okwu
N'ọnọdụ ọ bụla, nke ahụ bụ ka ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị na-egwu egwu mgbe ọnụahịa bounce na-ekwukarị adịghị enwe echiche kachasị mma banyere ihe gbasara mkpọtụ a ma ama, ma ọ bụ ma eleghị anya, ihe ọ bụla ọzọ na-arụ ọrụ dị ka nke ahụ . Ịdị mma nke ndị na-amaghị ihe na-adị na weebụ. Ọ dị ka ihe mgbagwoju anya dịka ọ bụ egwu.
Nke a bụ ihe mgbagwoju anya nke eziokwu: Ọnụ ego bouns bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ahapụ saịtị gị n'enweghị nyochaa ibe ọ bụla ọzọ karịa peeji nke ụzọ. Ịme ihe dị ukwuu? Anyị kwesịrị ibuli mkpuchi ihe nzuzo a na-akpọ ọnụego ụba maka oge ikpeazụ.
Kedu otu anyị si anabata ụfọdụ atụmanya na-achọ "ọkachamara ọkachamara" na Google, na saịtị gị na-abata n'etiti iri mbụ (10) na-abịa site na nke eziokwu ahụ bụ na i kpebisiri ike ịgbaso ihe omume ndị a kacha mma WordPress SEO. Ebe ọ bụ na ịchọrọ "Otu esi họrọ Nzuzo zuru okè na WordPress" ugbu a na-enwe ekele dị ukwuu maka meta ịkọtara na ị kwadoro Google, ha na-agagharị na saịtị gị. Nke a na ntinye ntinye bido abanye n'ime akwukwo ozo gi, ma obu nani "ngalaba".
N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ha na-abanye na saịtị gị, ha na-achọpụta ngwa ngwa na ị bụghị ihe ha tụrụ anya ya, n'ihi ya, ha na-adaghachi azụ, dezie URL ọzọ ma ọ bụ tụọ PC ha na windo. Ọrụ ahụ dị mfe nke ịhapụ peeji nke njem na-enweghị ijikọta na ihe ọ bụla fọdụrụ na saịtị gị mara dị ka ụtụ.
Mgbe ị na-agbaso bounces ndị a mgbe oge ụfọdụ gafechara, ma mesịa mee ka ha dị iche na ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-aga na saịtị gị, ị ga-enwe nha. Mee nkowa nke oke na ọnụ ọgụgụ na ịnwe ọnụego.
Kwenye na nke a nke mgbakọ na mwepụ ka ị banye n'ime. Nke a bụ ihe nkwụsịtụ iji kwupụta echiche ahụ n'ụzọ doro anya, Were ya na WordPress na-enye ndụmọdụ na 1,000 ọbịa, na 750 fọdụrụ n'otu ntabi anya na nyocha nke nyocha ahụ, ọnụego gị ga-abụ:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; Bounce rate = Bounces / Total Visitors x 100%
N'ebe ahụ mgbe Ọnụ Ụgwọ Mgbapụta Gị Kwesịrị Ịkpa Gị Ahụ
Ebe ọ bụ na anyị nwere "ihe" si n'okporo ụzọ a kụrụ akụ, olee mgbe ụbụrụ gị ga-agbasi gị ike? Mgbe m na-eme ihe ndị m na-emekarị, ejiri m ihe ngosi dị mma nke Neil Patel dere bụ nke nwere akara ọnụ ọgụgụ maka ụba ọnụego. Ịmechapụ ndị agha bụ akwụkwọ akụkọ weebụ na ọnụego bounce dị elu dịka 98%, sụgharịrị site na iwe ekele ke 70 - 90% na ebe obibi ọdịnaya na 40 - 60%. Ebe ndị na-eduga na-abịa na 30 - ọkara, ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa na 20 - 40% ma na-edugharị site na nchịkwa na 10 - 30%.
Site na oke, ị kwesiri inwe nrụgide ma ọ bụrụ na ọnụego akwụmụgwọ WordPress gị karịrị 60%. Ọkara dị ala dị ukwuu, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịde akara n'okpuru 10%, ị dị mma. Gbalịa ịghara ịsachasị ihe ọmụma ahụ, ị ​​kwesiri ịtụle (ma ọ bụ chee echiche banyere ya) ọnụego gị nwere ike imebi ihe ngosi gị.
Dịka ọmụmaatụ, na ohere na ị debanyere aha 95%, ọ ga-ewetara 65% ka ọ bụrụ na ị na-eche na ị ga-agbakeghachi, dịka ọmụmaatụ, ndị anyị ga-akpa nkata ebe a taa, ị ga-emerịrị bubbly n'ihi na nke ahụ bụ mgbanwe dị ịrịba ama, n'agbanyeghị na eziokwu ahụ karịrị 60%.
Ka ọ dị ugbu a, i kwesịrị icheta na e nwere ọtụtụ ụdị ebe nrụọrụ weebụ dị na WordPress, na ọbụna ihe, nke ahụ ga-enwe ọnụ ọgụgụ dị elu dị ka ihe dị mkpa. Ezigbo ihe atụ bụ saịtị WordPress. Otu ihe nke ihe ga - enwe ọnụ ọgụgụ dị elu bụ ụgwọ ekele gị nke na - adịghị ebute ụfọdụ ibe. Dịka ọmụmaatụ, saịtị, dịka ọmụmaatụ, okwu ntanetị nwere ike ịnwe ọnụ ọgụgụ dị elu, ebe ọ bụ na ndị ahịa dị ka iwu anaghị ehichapụ ibe weebụ nke nwere nkọwa ha na-achọ.
Cheta otu n'ime ihe ndị a ka ị na-ekpebi ọnụego gị. N'ọnọdụ ọ bụla, maka ihe niile na ebumnuche, 60% bụ ọnụ ọnụ ala anyị. N'ime nke ahụ, ị ​​nọ na mpaghara ihe ize ndụ. 40 - 60% ị na-adị ndụ, 10 - 40% ị na-eme nke ọma, na <10%, ị na-achọ mma.
Anyị enwetala ihe na mgbe. N'ọnọdụ ọ bụla, gịnị kpatara ọ ga - eji dị mma ka ị gbalịsie ike ịnyaa n'ọgba akwụ ụgwọ ahụ dị elu? Gini mere o ji di oke mkpa ichota oke onu ogugu efu? M ga-agba ọsọ, ya mere, anyị nwere ike ịnweta ndokwa dị ka ọ dị ugbu a.
Gosi m saịtị nke nwere ọnụ ọgụgụ dị elu, ma m ga-egosi gị saịtị na ndị ahịa mmechu ihu. Ewezuga ebe etiti peeji nke, akara aka na ntanetị, The Million Dollar Homepage et al, saịtị ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ dị elu dị elu dịka ya na ndị ogbenye na-emekọ ihe ọnụ.
Na ohere na ọnụego ụba ahụ dị ntakịrị, ị na-arụzu ihe ziri ezi, na ịkwesịrị ịrụzu nnukwu ihe ị na-eme. Ọ bụrụ na ọ dị oke elu, ị ga-enweta ụlọ gị niile ọnụ na ihe mgbakwasị na mma ahịa njikọ na-agba ọsọ dị ka onye na-apụghị ịparapụ unit na ...
N'enye gị na ị ga-enweta uru site na saịtị WordPress, ịkwesịrị ịgbanwe ndị ọbịa na-adịghị mkpa maka ndị ntanetị ndị ahịa, ndị ahịa, ma ọ bụ ndị na-akwụ ụgwọ na ndị na-akwụ ụgwọ. Ị ga-enwe oge nsogbu iji mezuo nke a ma ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị arapara na-ele ihe ọ bụla fọdụrụ na saịtị gị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ niile na-eme ihe ngosi gị na-agbapụ, ị kwụsịrị agha.
Ị na-achọ ka ị na-atụ anya na ị ga-eme ka njikọ ha na aro na ime ihe ga-eme ka ị bụrụ ịkwụ ụgwọ. Ọnụ ala dị ala na-egosi na ndị mmadụ anaghị ahapụ saịtị gị ozugbo ha rutere. Ọdịiche na-adịgide adịgide.
Rịba ama: Ị nwere ike ịnwe ọnụego dị elu na ọnụego mgbanwe.
Ezi okwu bụ saịtị WordPress nke na-arịọ ka atụmanya kpọọ gị. Ọ bụrụ na mmadụ 1000 na-abanye na peeji nke a, ma 800 kpọrọ gị, ị ga-ahọrọ 80% mgbanwe ọnụego n'agbanyeghị na i nwere ike ịkwụ ụgwọ ọnụahịa gị bụ 100%.
Ihe ọzọ: Ka anyị kwupụta na ị ka ga-eziga ihe gị, ma na njedebe nke akwụkwọ ngosi gị, ị na-ejikọta na njikọ weebụ gị na netwọk mmekọrịta gị na ya iji mee ka otu ìgwè. Ị nwere ike ịmalite ịmalite ọganihu gị ọ bụla n'agbanyeghị na o nwere ike ịbụ na saịtị gị na-ahọpụta ọnụ ọgụgụ dị elu.
Mee nke ahụ, ma ọ bụrụ na CTA gụnyere ịgụ akwụkwọ ọzọ na saịtị gị (dịka arịrịọ ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta), ị gaghị enwe mgbanwe dị elu na ọnụego dị elu. Ha abụọ apụghị ịgakọ - ụdị ọkụ na mmiri.
Maka oge ọ bụla ogologo oge onye ahịa ahụ kwadoro na ibe gị n'ime ụzọ ọ bụla ị chọrọ, ị nwere mgbanwe. Na ohere na ha na-ahapụ na-enweghị ọrụ na ihe ọ bụla fọdụrụ nke gị na njikọ njikọ, ị ga-enwe nnukwu ọnụahịa ọnụego. Ịga n'ihu n'ihu ...
BAM! Nke a bụ ihe dị mkpa ịkwesapụ iji hụ. Kedu? Ndị mmadụ n'otu n'otu ga-akwụsị ihe niile ha na-eme ma lekwasị anya mgbe ị depụtara SEO. Nke a bụ n'ihi, nke ọma, na-enweghị "nnwere onwe" nke na-agbagharị na weebụ, ọ bụ mgbanwe dị aṅaa ka onye ọ bụla na-eme?
Kwadoro, ị nwere ike ịmegharị site na isi mmalite dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị naghị eji SEO eme ihe, ị na-enwe mmetụta nke ọnwụ anyị na nnukwu azụmahịa. Ị na-ahapụ ego na tebụl.
Gịnị kpatara nke a? Mbụ, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ntanetị na-enweta nnukwu ọrụ site na ntanetị weebụ. N'ụzọ doro anya, ị ga-ahọrọ ịghara ichezọ. E wezụga nke ahụ, ndị mmadụ n'ozuzu ha na-achọ nhazi site na ngwa ntanetị weebụ bụ ndị na-azụ ahịa kachasị emetụta. O doro anya na SEO dị ezigbo mkpa. Ọzọkwa, ịtụle ọnụego elu ọnụahịa abụghị ụzọ ị na-esi arụpụta profaịlụ SEO siri ike.
Nke a bụ ụzọ nke ụmụ ahụhụ Google na-esi kọwaa ọnụego elu: Ndị mmadụ na-ahapụ saịtị gị ngwa ngwa ha bịarutere n'eziokwu nke eziokwu na ị dịghị mkpa. Ikwenyeghi gi, ya mere gi adighi adi nma SEO. A tụlere ihe niile, ebe nrụọrụ weebụ gị na-akwagharị azụ, mmegide gị na-ewekwa ọnọdụ gị na ọrụ gị. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke mgbagwoju anya dị nnọọ egwu.
Anyị nwere mmalite nke mbido. Ugbu a, anyị kwesịrị imebi. N'oge na-adịghị anya, ị ga-agbaze na ọnụ ọgụgụ dị elu nke mgbagwoju anya nke a na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eme ka okporo ụzọ gị gaa na ntanetị. Tupu anyị aga n'ihu, m ga agba gị ume ime ngwa ngwa ngwa ngwa a, ọ bụghị nanị gụọ ya. Ọ bụ ọrụ dị mfe, ebe ọ bụ na anyị na-eme ka azụmahịa gị na-agba ume, ị kwesịrị inwe ezigbo oge mgbe ị nọ na ya. Ozugbo, ebe anyi gara ...
[Ọmụmụ okporo ụzọ anyị] na-enye anyị isi ihe ọmụma nke na-akwalite ọganihu nke ihe anyị na ngwa na desktọọpụ anyị. Ọ na-egosi anyị kpọmkwem otú ndị mmadụ n'otu n'otu si eji ihe anyị na-eme ihe ọ bụla. - Jeffrey Fluhr, CEO SpreeCast
Nke ahụ dị mkpụmkpụ na ogologo ya? Kedu ka ị ga - esi gbadaa ọnụego akwụmụgwọ gị na saịtị WordPress gị na ohere ị na - amaghị ebe ebe okwu ahụ dị? Nnyocha nta ga-enyere gị aka ịmepụta kpọmkwem ihe mere ị na-enwetata ọnụego blọọgụ na-eserese.
Ma eleghị anya, ị na-adọta ndị na-esite na China ma ọ bụ okwu gị na ihe ndị a na-akọwa maka ndị ntanye na USA. Ma eleghị anya ọdịmma gị anaghị edozi ndị nke gị. Ndi onu ogugu gi nke a mara na ndi mmadu ndi ozo biara ma obu ndi biara? Ikekwe ọ bụ ihe ọhụrụ; saịtị gị na-eme ka ndị na-ere ahịa dị mkpesa na-emejọ.
O nwere ike ịbụ ihe ọ bụla. Ọnụ ọgụgụ gị dị elu nwere ike ịdị na-edozi ma ọ dịkarịa ala otu components, Otú ọ dị, ị gaghị ama ma ọ bụrụ na itinye uche gị n'ọrụ gị. Maka nke a, ịchọrọ ngwa nyocha, dịka ọmụmaatụ, Google Analytics, Piwik, Crazy Egg, Clicky, na Web Trends naanị ikwu di na nwunye.
Na-echebara ihe nile site na ndi mmadu na aku na uba anya ka ha rute ebe, omume ndi mmadu, na ndi ozo ndi mmadu na-eji ihe di iche. Nyochaa ihe ọ bụla ị ga - eme njem a - ị ga - enwe ike ịghọta ihe gbasara ọrụ gị na mkpịsị aka gị. Nke ahụ bụ ihe onye nkụzi nke Chemistry na-eme ka anyị mara - nwere ihe ndị a na mkpịsị aka gị, ma ọ bụ gaa n'ụlọ ma họrọ na otu ụlọ akwụkwọ. Haha, ọnọdụ agadi.
Maka nkeji, olee otu anyị si egwu egwu ahụ dịka ịhụnanya zuru oke ruo n'ókè. Hụ na ị na-achọ ụgbọ ụgbọala Audi kachasị ọhụrụ. Otu Audi A4 na-egbuke egbuke ka ọ bụrụ kpọmkwem. Chekwa na ihe kacha pụta na Google abụghị ebe saịtị Audi dị, ebe ọ bụ na nwatakịrị ahụ na-achọpụta ngwa ngwa.
Ị na-agbazi ụgbọala ị ga-eji ụgbọala gị na-ebugharị ụgbọala ahụ n'oge a otu izu site na ugbu a. Ya mere, ị ga-aga Google, chọọ Audi A4, na ohere ọ bụla n'elu "newcars15.com" nke na-ewe oge n'ogologo, na njem gbara gburugburu eluigwe na ụwa iji dochie. Ị ga-arapara ma ọ bụ jiri ego $ 30,000 gị rụọ ebe ọzọ? Amaara m na agaghị m ebili, n'ihi eziokwu ahụ bụ na saịtị ndị dị oke mma nwere ike iwepụ ndụ gị n'ezie.
Hụ anya nke ọ bụla n'ime oge ndị ahụ bara uru ị na-emechu ahụ. Kedu ihe ọzọ, nkasi obi dị aṅaa ka ị ga-enweta Audi A4 gị site n'izu otu site ugbu a site na newNresX.com ọhụrụ ma ọ bụrụ na saịtị ahụ na-ewe mgbe nile iji nchịkọta? Kwado, enwere m ike iwepụ ya, ma nke ahụ bụ ihe kpatara na m na-eche ụda nke ị ga-esi nweta ya, nke ọnọdụ anyị bụ: Ebe dị oke ala ga-enwe atụmanya sitere n'ike mmụọ nsọ na-akụ azụ azụ jidere ngwa ngwa karịa ka ha na-ahụ ihe ị 'na-agbanye. Anyị etinyewo okwu a n'ọtụtụ ebe na - esi eme ka mkpirisi gị bọọlụ wdg.
Anyị nwere nwatakịrị a nke ise dị ka ọ dị ugbu a, anyị ka na-akụkwa ụlọ nkịta. Ụzọ saịtị saịtị WordPress, olee otú ọnụ ala a dị ala? Ọ bụ isi; ụzọ dị egwu na-esite na nduzi (ma ọ bụ akara ngosi) nke na-eduzi ndị ahịa site na saịtị gị.
Mary Jane na-aga Google na-enye ya ịchọta ebe a na-enye ọtụtụ ndị na-aza ajụjụ maka azụmahịa ya. N'ihi ọtụtụ ihe ị na-eme iji mee ka ị nwee ike ịme ihe na-emetụ egwu, ịkọ "20 Best WordPress Response for 2015" post na-egosi na mbụ na Google, ọ na-agagharịkwa.
Ọ na-ewepu akwụkwọ niile ahụ, ma site na ya fervor ahọrọ iji lee anya na WordPress na-achịkwa peeji nke na ọ nwere ike ịnweta ohere site na nkụnye eji isi mee, sidebar ma ọ bụ ụzọ ụkwụ. N'agbanyegh i na o gagh i az u ihe ob ula i kwuru, o gagh i eleba anya.
Ugbu a ileghara Mary Jane anya. Tụlee ihe banyere John Doe bụ ndị chọpụtara na saịtị gị (site na nke ọ bụla) ma chọpụta ụfọdụ data. Kedu ka o si dị mfe maka John Doe iji chọpụta ọdịnaya na saịtị gị site na usoro ụzọ gị? Ì chere na ọ ga-agbachitere na ihe omume na ọ pụghị ịchọpụta ihe ọ na-achọ?
Ụzọ kachasị mma bụ ihe ọ bụla ma sie ike iji ya. Ọ bụ isi ma doo anya, nke na-enyere m aka icheta otu oge m na-achọ ihe omume nkuzi Java. N'ihi ya, m rutere ebe a mara mma site na ụlọ ọrụ ziri ezi (enweghị aha idobe, enweghị ihe ọ bụla).
Ebe ahụ dị iche iche - nkọwa na-arụpụta ọrụ na ọrụ. Ana m atụle ụdị saịtị ị ga-atụkwasị obi na ịhọrọ dị ka ihe na-adịghị mma. N'ọnọdụ ọ bụla, nke ahụ bụ tupu mụ emee ka ọ bụrụ na m na-enweta ihe omumu ntụziaka Java n'efu nke kwesịrị ịchọta ihe ndị ọzọ, ị maara, dị ka m.
Ogologo mkpirikpi mkpirikpi okwu, ihe omumu nke ihe omumu bu ihe ndi ozo n'ile ihe di elu, m weere oge di ka ekwuru na m na onye mmadu nwere ike, ma achoro m ichota ihe omumu Java. mmega ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere m obi egwu na ị na-egwu ala site na mpempe akwụkwọ nwube iji chọta ebe a na-anọ naanị otu, nke ahụ emeghị ọkwa banyere ọchịchọ m ka a tụlere ihe niile. Meh. Njedebe nke tirade.
Onye mmadu na-adighi obi uto agaghi enweta ike zuru oke iji lelee uzo gi nile maka ego ha choro n'ezie. Mee ka ihe ọ bụla dị mkpa dị mfe iji chọpụta site na ụzọ ụzọ gị, ọ ga-abụrịrị na ọnụego gị ga-agbadata. M na-agbagha gị? Nke a bụ takeaway:
Mee n'ụzọ ziri ezi, ụzọ ga-aga n'ihu
Ndị ikom ukwu dị oke egwu, ma ịchọrọ n'ezie ha?
Tinye nbudata na saịtị gi na WordPress. Ịnwere ike iji ya rụọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, Google XML Sitemaps ma ọ bụ jiri isiokwu na saịtị saịtị
Tinye nchịkọta ụzọ gaa na nkụnye eji isi mee gị, ụkwụ na n'akụkụ ọnụ
Gụnye klas, faịlụ na akwụkwọ aha n'akụkụ ọnụọgụ
Jikọta igbe ịchọta dị ka ngwaọrụ nchedo kwesịrị iji mpempe menu gị. Igbe ịchọrọ gị nwere ike ime ka ụzọ nlezọ gị na onye ahịa zute. Jiri nchịkọta, dịka ọmụmaatụ, Relevanssi iji mepụta ngwa ngwa intaneti na nke zuru ezu maka webpage weebụ gị
Mgbe ị gara ụlọ ahịa ịzụ ahịa, ị na-etinye oge gị na ụlọ ahịa ndị na-enye ụdọ ma ọ bụ oké egwu? Anaghị m agba gị ụgwọ, ọ gwụla ma ị bụ onye nwe ụlọ ahịa dị otú a, nke ga-eme ka obi sie gị ike.
Ihe na-abaghị uru ga-ezigara gị ọnyà gị ngwa ngwa karịa ka i nwere ike iburu ha. Mee m ka m mara, ị ga-asị na ị ga-etinye ego bara uru nke na-achọpụta ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na e nwere ihe dịgasị iche iche ihe ọchị ndị ọzọ na-eme na weebụ? Ị maara, dị ka Cheezburger, na-enwe obi ụtọ na ihe nkiri YouTube, nakwa na ndị ọzọ. Kedu ihe na-eme ka akụ dị njọ?
Ihe nchekwa - Biko chekwaa ihe gị
Ihe ndokwa na-emeghị nke ọma na eserese-eserese - Foto nke ihe osise bụ 660px n'ogologo, ihe na-esonụ bụ 350px
Ejiri ọdịnaya - Gụnyere foto. Egwuregwu ndị na-ere ahịa nye ndị nwe ụlọ, ma ọ bụghị ihe abụọ. Ọ bụ ihe ọjọọ.
Gbanwee ma dezie ihe ndị ị na-eche n'echiche na ntinye blọọgụ na ụdị dịgasị iche iche na-ezighị ezi bụ nanị mgbaghara
Ọzọkwa, gbalịa ịkwalite mkpebi nke ọdịnaya na WordPress blog. Ihe ndị nwere ọgụgụ isi ga-agba ndị mmadụ ume ịgagharị na ibe njikọ
Ihe ndekọ akụkọ
Isi na isi isiokwu
Ụdị ederede buru ibu
Mgbanwe dị iche iche nke na-echebara anya (na-agbakwunye atụmatụ abụọ nke atọ)
Ọtụtụ oghere ọcha
Ihe nkesa mgbasa ozi ọzọ
Mgbe ị na-eme ihe ntinye akwụkwọ WordPress gị, gụnyere nhazi na nchịkọta, otú ahụ ka ndị na-anụ ọkụ n'obi nwere ike ịchọpụta ihe ndị metụtara ya maka ịkọkwu ihe. Buru n'uche na ịghachitere blog gị na ihe kachasị adị ugbu a ebe ọ bụ na ọ na-eme ka nkwụsị ahịa na SEO sikwuo ike.
Ọzọkwa, mara njirimara mmasị ị chọrọ site na ịmalite ikwenye na ị na-elekwasị anya na nchịkọta ziri ezi nke ndị mmadụ n'otu n'otu. Ma, ị ga-eme ka anya gị hụ, ị ​​ga-eme mkpụmkpụ ma wepụ ọnụ ọgụgụ ndị ahụ.
Ihe niile na-eme nkwụnye ụgwọ nkwụnye ụgwọ na saịtị WordPress gị ga-aba uru na ohere ị na-elekwasị anya na nnọkọ ọjọọ nke ndị mmadụ n'ọnọdụ ọ bụla. Ọ bụrụ na m na-akọrọ akụkọ banyere ebe m tolitere, Meru, Kenya, m ga-eji usoro SEO dị nso maka m iji jide n'aka na anaghị m adọta ndị na-achọgharị Mt. Dị ka ihe atụ na Tanzania. Ojuju m ga - ahọrọ ka ị ghara ịbịaru ndị nyocha na - achọ taxi Meru na India ma ọ bụ ndị ahịa na - achọ Meru Networks dị na Tampa, FL.
N'elu ohere nke m dọtara n'ime mmadụ ọ bụla ma e wezụga ndị mmadụ niile na-achọsi ike na ebe m tolitere, saịtị m ga-edebanye aha ọnụ ọgụgụ dị elu - niile ebe ọ bụ na m lekwasịrị anya na ndị na-ege ntị na-ezighị ezi.
Otu na-aga maka PPC ịkwalite mgbalị. Na ohere na ị na-elekwasị anya na ihe ọjọọ, ị ga-akwụ ụgwọ iji dọta ihe niile ma e wezụga maka ijegharị ị chọrọ. A ga-eji nlezianya nyochaa catchprase gị SES na PPC crusades. Jiri okwu nyochaa banyere ngwaọrụ, dịka ọmụmaatụ, Google AdWords Keyword Planner, Word Tracker, Yoast na-atụ aro na KWFinder.com n'etiti ndị ọzọ.
Gbalịa ka ị ghara ịchacha isi ihe ndị gbasara mmasị, anyị nwere azụ gị na WordPress SEO Best Practices maka 2015 na N'ọfe. Nakwa, kwe nkwa na ị ga-ebuli elu n'ọnọdụ niile akara gị dịka foto gị ma ọ bụ aha ihe.
N'iburu n'uche ibiaghachi ọnụego, enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji mee ka njikọ gị dị ọcha ma nweta ebe nrụọrụ gị dị ka ihe nkedo. Ighachite njikọ njikọta, ime ka usoro ịghachị gị na oghere mmeghe banye na taabụ bụ ụzọ pụrụ iche ịmalite.
Onye ọzọ ọbịa nwere ike ịbanye na ibe weebụ gị site na ibe weebụ ọ bụla ma ọ bụ post. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịghasị njikọ jikọtara gị WordPress saịtị, atụmanya gị agaghị achọpụta data ha chọrọ, ya mere, kụrụ azụ catch. N'elu ohere na ha ka na-akụ azụ azụ azụ, ị ga-enwetakwa ọnụọgụ ụgwọ dị elu nke bụ mkpebi dị mfe.
Ị nwere ike ịlele gị WordPress saịtị maka agbajikwa njikọ utilizing a modul, dịka ọmụmaatụ, Broken Link Checker. Ọbụna nke ka mma, ị nwere ike iji nchịkwa ntanetị, dịka ọmụmaatụ, W3C Link Checker. Nke kachasị mma bụ idozi njikọ gị niile gbaruru agbapụ ka ị ghara ịkwụsị bọtịnụ ahụ ogologo 'tupu ya eme.
Ma, gịnị ka ị ga-eme mgbe njikọ gbaruru na oge mgbede n'ihi ụzụ njem ma ọ bụ ihe ọzọ kpatara ya? N'ezie, nke ahụ dị mfe - ị nwere ike igbochi esemokwu a ma ọ bụ site na ịmepụta 404 ma ọ bụ na-agbaghasị njikọ nke na-achọta ihe dị mkpa, dịka ọmụmaatụ, ị na-egosipụta ihuenyo ma ọ bụ ibe ọ bụla ọzọ ị masịrị.
Nke a bụ ụzọ ime omenala 404 omenala na WordPress ma ebe a bụ Mfe 301 Redirects modul iji nyere aka n'ịzụ ahịa.
Ịhụ ọnụọgụ ụgwọ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na-agbapụ na ngalaba mpaghara, na-agbakwunye na njikọ nke akụ nwere ike ime ka ndị ọbịa bịa pịa na ibe mbụ. Na ohere na ị nwere ntinye akwụkwọ blog na-adọrọ adọrọ nke na-akwado gị mee, jikọọ ya site na ibe gị dị iche iche, isi nke mbịakọta gụnyere.
Ihe atụ ndị na-adịghị njikere ịbanye ọnyà na saịtị ekele gị ga-adị mkpa iji nyochaa saịtị gị na-akwalite. Ijikọta na ihe ndị dị mkpa na-eme ka ọ dị mfe maka ọdịnihu. Mgbe ha na-ebugharị, ọnụego gị na-agbada.
Mepee Ọpụpụ n'èzí na New Taabụ
Tupu ịhọrọ ịchọta aghọọla eziokwu, ọ bụ ndị ahịa na-anabata mmeghe ndị ọzọ na windo ọhụrụ ebe ọ na-eme ka onye ahịa zute. Dị ka o nwere ike, ebe ọ bụ na nhọrọ ị na-achọ, ịfụgharị weebụ yana ọtụtụ ebe ọ bụla mgbe ị na-emeghe nwere ike ịdị mfe, na ọbụna fun.
Taa, ị gaghị enwe oge ịmeghe njikọ ọ bụla n'èzí na ntanetị ọhụrụ, ma ọ bụrụ na o doro anya, ndị ahịa gị kwetara mmemme ochie ndị anaghị eme ka taabụ. Kedu ka imeghe njikọ ndị dị n'èzí na kọntaktị ọhụrụ ga-eme ka ọnụego bounce na saịtị WordPress gị?
Kwuo ka ị meela nnukwu ntinye blọọgụ, wee jikọọ na akụ dị mma na saịtị ọzọ. Ọ bụrụ na njikọ ndị a dịpụrụ adịpụ na-emeghe na window / taabụ usoro mmemme ahụ, nọmba mmemme sayensị na-apụ. Buru na dika o nwere ike, na ohere gi na imeghe onodu ozo na ntanet ohuru, onye na-edepu gi nwere ike inweta ihe ndi ozo n'enweghi ike wepu ebe gi. Mgbe ị na-ejikọta njikọ ndị ọzọ, kwanye "Open njikọ na window / taabụ" igbe dị ka egosipụtara dị ka ndị a:
Melite gị WordPress Site
Eji m eme ihe ebe a: Ị ga - anọchi anya (na - arụ ọrụ na) saịtị nke yiri ka ọ bụ ọrụ nke ise na - arụ ọrụ? Ọ bụrụ na saịtị gị adịghị mma karịa nyocha nke ụwa, ị pụghị ịtụ anya na ndị mmadụ ga-anọchi ogologo oge ịzụta ihe dị na ya.
Tinye ihe ndi ozo n'ime akwukwo di iche iche echekwara ya, dika imaatu, onye nke anyi bu otu ihe n 'ajuju akwukwo Nsiputa. Ọzọkwa, naanị ị nwere ike ịnweta ndị nwere nkà na ndị mara mma site na WordPress.org ma ọ bụ ndị na-ere ákwà, ọmụmaatụ, Themeforest na Gburugburu Gburugburu.
Mgbe ọzọ, ị nwere ike iru gị na saịtị ibe site ibe tinye n'ọrụ mbụ klas WordPress na peeji nke mmepe, dịka ọmụmaatụ, Anya Composer ma ọ bụ Beaver Nrụpụta ihe na-ekwu dị nnọọ ma a di na nwunye. Ị nwekwara ike iji ihe ndị a magburu onwe ha na-eto eto ndị na-eso usoro isiokwu WordPress, dịka ọmụmaatụ, Jenesis ma ọ bụ Tesis.
Na ohere ọ bụla na ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na enwere nhọrọ ndị ọzọ dị iche iche na-arụ ọrụ, ma ị nwere ego iji chekwaa, chee echiche banyere ịzụta dịka onye mmepụta ihe kachasị elu iji chepụta gị kpọmkwem ihe ị chọrọ (nanị cheta na nke a bụ oge kachasị oke ọnụ ma dị egwu ihere nke ịchọta otú ị ga-esi dee onwe gị).
Mgbe ị na-akwalite saịtị gị, chee echiche banyere gụnyere dịka nkwenye nke ọha mmadụ; ọnụ ọgụgụ nke ndị na-adọrọ mmasị, ndị fan, ọhụụ - ihe ọ bụla na-agwa ndị ahịa ndị ọzọ na-eji ihe gị akpọrọ ihe. Ọ bụrụ na i nweghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, echefula ichefu nkwenye ndị mmadụ ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ dị ka ọnụ ọgụgụ dị ala nwere ike iri mmadụ ntụkwasị obi ahịa, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ị na-adị mfe.
Kwalite ihu akwukwo ekele gị na itinye nyocha A / B na ule ule. Otu ihe ị ga - ahọrọ ka ị ghara ileghara anya tinyere CTA na - enweta ebe doro anya na nke mara mma nke akwụkwọ ekele gị. Ihe kachasị njọ nke CTA atọ ga-ezu; otu ngwa ngwa na isi, otu na etiti na nke ikpeazụ gafee isi.
N'agbanyeghị na azụmahịa a, ị ga-agbanwe akwụkwọ ekele maka otu ìgwè nke ndị na-ele anya. Jiri kemgwucha pụrụ iche na mgbakwunye catchphrases maka ọbịbịa nke ọbịbịa ịme otu nnọkọ nke ndị mmadụ.
N'elu nwelite ntanetị, njedebe bụ ụzọ na-aga n'ihu, maọbụ dika Maya Angelou (ka Chineke mee ka mmụọ ya dị jụụ na udo ebighi ebi) kwuru, "Ọhụụ nke ọganihu bụ ihe na-enweghị isi."
Ọ dị mkpa ịmepụta ọgaranya ma dị mgbagwoju anya nke ga-adọta atụmanya na trawls? N'oge ahụ, ịkwesịrị ime ka ọ bụrụ ihe kachasị mfe na nke kachasị na-eji saịtị na weebụ. Malite site na iwepụta ihe na-enweghị isi na-akwadoghị ma ọ bụ jupụta mkpa gị.
N'elu nke ahụ, nọgide na-enwe nchebe dị anya site na popups na nkwalite. Tụkwasị na nke ahụ, kwenye na mgbasa ozi ị na-eje na saịtị WordPress gị dị mkpa maka ihe gị na ọkachamara gị. Tinye mgbasa ozi dị ịrịba ama n'akụkụ ọnụọgụ, na na ihe omume ị nwere ike, nọgide na-enwe nchebe dị anya site na nchụpụ onwe onye na mgbasa ozi ọma.
N'okwu mgbe mgbe niile kwuru ma mee, kwe nkwa na saịtị gị na-anabata ya iji chebaa ma desktọọpụ na ndị ahịa dị. Họrọ ihe omume WordPress, (dịka ọmụmaatụ, Total) site na mmalite. Jiri nkwenye mee ka modulu ị na - ahọrọ dị mma maka ekwe ntị.
Ohere dị mkpa ịgafe ebe a na-ede akwụkwọ? N'oge ahụ mee ka ọ dị mfe maka ha ịchọpụta ihe ka ukwuu nke ihe gị. Ịnwere ike itinye ngwaọrụ nrụnye na njedebe nke ntinye gị blog ma ọ bụ na sidebar gị - nanị hụ na ha bụ ndị doro anya gị. Ozi ọma na-adịghị mkpa ọ dị gị mkpa iji mee mgbalị dị mma, e nwere WordPress na-enweghị njedebe na-enye igbe modulu na enyemaka na ọrụ siri ike.
N'agbanyeghi na nke a agaghi adighi emetụta onu ogugu gi iji malite, blog na-ekwu okwu nwere ike inyere onye nkwado aka n'ogologo oge, nke na-eme ka onu ogugu. Mgbe ị na-echekwa ndị ahịa gị site na nkeji blog, ha ga-ekwenye na gị ọzọ, tinyekwuo ike na blog gị ma nyefee ndị ọzọ ihe gị.
Ọ bụ maka ịnye atụmanya gị ọrụ dịka ọ dịghị ọzọ na saịtị gị - banyere ịbanye na nke a ga-atụ anya na ị ga-abụ n'òkè ị họọrọ.
Mgbe ị na-ahazi atụmatụ gị, na ihe gị na ihe gị, na mgbe ịchisịrị ihe nile n'elu ihe edere n'eluigwe, ọ dịghị ihe ọ bụla iji gbochie gị ịbelata nkwụnye ego gị na WordPress.
Were ndụmọdụ ndị e depụtara ebe a taa, ma ọ bụrụ na ị nwere ọnụ iji kesaa, maọbụ ajụjụ maka olulu, biko egbula oge iji mpaghara ebe a. Anyị ga-enwe mmasị ịnụ ihe ị na-eche - bye-bye!
Tis Oge, Google Doodle na-ewepụta mmalite nke ezumike